ubusazi ukuba imiyalezo ethunyelweyo ethuleyo inokusetyenziselwa ukujonga ukuba uphi?
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ubusazi ukuba imiyalezo ethunyelweyo ethuleyo inokusetyenziselwa ukujonga ukuba uphi?
Ubusazi ukuba imiyalezo ethunyelweyo ethuleyo inokusetyenziselwa ukujonga ukuba uphi?
Ubunini be-Smartphone bukonyuka kwihlabathi liphela, kwaye e-US, ngakumbi, Ama-65% emizi anayo ubuncinci . Yay? Ewe, hayi ngokokutsho komntu wonke. Ngeeradi zabo zeGPS kunye nokunxibelelana kwedatha rhoqo, ii-smartphones zinobuchwephesha obunakho ukulandelela indawo esihlala kuyo kunye nokubeka iliso kwimisebenzi yethu, eyoneleyo ukuphakamisa inkxalabo yabucala phakathi kwabasebenzisi. Bambalwa abantu abaziyo, nangona kunjalo, ukuba iifowuni zinokukhangelwa ngaphandle kokusebenzisa umyalezo obhaliweyo.
Uhlobo lomyalezo omfutshane 0, ekwabizwa ngokuba yi-SMS ethe cwaka, isetyenziselwa injongo, kwaye ezi bezikho kangangeminyaka. Isiphatho esiphathwayo esithunyelwe kuso'kufuneka avume ukuba uwufumene umyalezo omfutshane kodwa angalahla imixholo yawo', njengoko kuchaziwe kwinkcazo yezobuchwephesha ye-GSM. Ngamanye amagama, umthumeli uyazi ukuba umyalezo wakhe ufunyenwe, kodwa umamkeli akanakufumana siboniso soku - ifowuni ayikhali okanye idlidlize, kwaye umyalezo awuveli kwi-inbox yeSMS.
Imiyalezo ethule cwaka ingasetyenziselwa ukukhangela ngasese ukuba ingaba ifowuni yomsebenzisi neefowuni zivuliwe okanye hayi. Ngokukrakra, kukho iiapps ezikuvumela ukuba uthumele isicatshulwa esithuleyo, kwaye unokufumana i-Android kwivenkile yokudlala. Abaphetheyo ngaphandle kwamacingo kunye nabasemagunyeni, nangona kunjalo, banokusebenzisa i-sms yokulandelela ukulandelela indawo ekuyo ifowuni ngoncedo lwedatha efunyenwe yinqaba yeselula. Ii-ofisi zophando zolwaphulo-mthetho zaseJamani, umzekelo, zathumela ngaphezulu kwama-440 000 okubhaliweyo ngexesha lonyaka ka-2010, kwaye nokusetyenziswa kwazo kusenokwenzeka ukuba kwandile ukusukela ngoko.
Ke nokuba uyayithanda okanye awuyithandi, ukuba uneselfowuni esebenzayo epokothweni yakho, ukulandela umkhondo kwindawo okuyo akunakuba nzima nokuba uyicimile iGPS kunye nedatha. Apho mhlawumbi akukho sizathu sakuphapha, ewe, kuba amapolisa akanamdla wokuba uzakutya phi isidlo sangokuhlwa ngokuhlwa. Ngaphandle kokuba ucwangcisa ukungahlawuli, kunjalo.
izikhombisi: Zibe.de (Guqulela ukusuka kwisiJamani), ETSI (PDF)
Isony wh-1000xm4 uphononongo
Ithebhulethi yesamsung vs ipad pro
vutha umlilo ngolwesiHlanu ka-2016
Inzwa yentliziyo ye-Apple Watch kunye nenqaku le-ECG lingenza ingozi enkulu kunokuba lilunge kubasebenzisi abaninzi
Fikelela kwi-700 yeedola kwi-iPhones efanelekileyo xa utshintshela kwi-AT & T (kuthengiswa ngaphakathi)
I-11 yeyona midlalo ilungileyo ye-MMO ye-iOS kunye ne-Android (2021)
IJabra Elite 65t kunye neJabra Elite eyi-65t engenazingcingo yeendlebe
I-Quad-core vs octa-core: ngaba i-Android kunye neeapps ziyazisebenzisa zonke ii-cores?
Ungayibamba njani iTrafikhi yeNethiwekhi yoMkhangeli (XHR) ngeCypress
Faka ibango kwifowuni yasimahla kunye nedatha yebhonasi ye-4G LTE kwiMetroPCS